Mahjong. 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.online
Mahjong. MahJong dia lalao miafina izay mitaky fifantohana betsaka, fahendrena sy fahiratan-tsaina. Mianara milalao Mah Jong, manaova fangaro mety indrindra ary ho mpandresy lehibe.
Mahjong: Ahoana no filalaovana tsikelikely 🙂
Milalao Mahjong an-tserasera maimaim-poana, mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Dingana 2. Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no mila hilalao kilalao ary ankehitriny ianao dia afaka manomboka milalao ny sanganasa mitovy mba hanafoanana azy ireo.
Dingana 3. Ireto misy bokotra mahasoa. Afaka "Manampy na esory ny feo", tsindrio ny bokotra"Play"ary manomboka milalao, azonao atao"Pause"ary ajanony io, anontanio"manampy"na"reboot"amin'ny fotoana rehetra.
Dingana 4. Hamafa ny tsiroaroa rehetra mandra-pahatapitry ny lalao, mahatadidy hatrany ny fitsipiky ny lalao. Amin'ny farany, ianao dia ho afaka hisoratra anarana ny anaranao ary zarao amin'ny tambajotra sosialy vantany vao vita ny lalao.
Dingana 5. Rehefa vita ny lalao iray dia kitiho "Lalao" milalao amin'ny sarintany hafa.
Jereo koa ny Fitsipika ofisialin'ny Mahjong raha te hahalala ny fitsipika ofisialy iraisam-pirenena amin'ity lalao malaza ity.
Inona ny Mahjong? 🀩
Mah Jong dia jKilalao fiaviana sinoa nilalaovan'ny mpilalao 4 ary iray amin'ireo lalao mahafinaritra sy ankafizina indrindra ankehitriny. Izy io dia lalao fanaovana kajy, fahaiza-manao ary paikady ary ny lalao dia tena mitovy amin'ny an'ny daomy.
Ny lalao dia Sombiny 144 ary ireo dia manana tarehintsoratra sy marika sinoa manokana, izay mamela ny fahatsapana ireo fitambarana maro samihafa. Na izany aza, misy ny fiovana isam-paritra izay mampiasa faritra maromaro.
Ny tanjona lehibe indrindra amin'ny lalao dia ny ho voalohany mamorona tanana manan-kery izay mahafeno ny fepetra takiana farafahakeliny. Ny sandan'ny tanana dia miovaova ary faritana amin'ny fahasarotan'ireo fitambarana mandrafitra azy.
Ny tantaran'ny lalao mahjong dia lohahevitra niadian-kevitra niadian-kevitra teo amin'ireo manam-pahaizana. Misy mihevitra fa manana izany 2500 taona mahery ary ny hafa milaza fa tamin'ny taonjato faha-XNUMX na faha-XNUMX no nisy azy. Talohan'ny taonjato faha-XNUMX anefa dia tsy nisy firaketana ara-tantara.
Araka ny angano sinoa, ilay filozofa sinoa Confucius Nandray anjara tamin'ny famoronana ny lalao birao izy. Na izany aza, tsy misy porofo ara-tsiansa momba an'io. Angano na angano fotsiny ity miaraka amin'ity atiny manaraka ity:
Vehivavy tsara tarehy iray izay nanirery be taloha nipetraka tao amin'ny lapan'ny Mpanjaka Wu. Saika saika maty aho. Indray andro dia nanomboka nanamboatra sary tamin'ny volotsangana sy ivoara izay nitovy endrika tamin'ny vato domino izy. Rehefa vitany dia nitondra ny ankizivaviny izy ary nanomboka nilalao tamin'izy ireo. Confucius dia voalaza fa namolavola ity lalao ity bebe kokoa.
Raha adika avy amin'ny sinoa dia midika hoe "Mahjong" ary koa "fody mikorontana"ary, araka ny angano, nahazo ny anarana ity ny lalao board satria a Tian'i Confucius daholo ny karazam-borona. Etsy andaniny, ny andriana ihany no navela hilalao ny lalao. Raha nilalao an'io ny olon-tsotra dia nandika lalàna izy ireo.
Ny mpahay tantara kosa dia mino fa ny lalao mahjong dia avy amin'ny lalao karatra sinoa taloha izay voarakitra an-tsoratra any Sina tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Izy ireo dia mamantatra ny niandohan'ny lalao tamin'ny toerana misy azy ireo Shanghai, Anhwei ary Kiangsu, satria hita eto ny porofo momba ny lalao karatra toy izany.
Sombin'ny lalao Mahjong 🀄🀩
Ny seta mahazatra dia misy Sombiny 136 na 144. Ny seta Mahjong dia mizara sokajy samihafa:
Ny ampahan'ny dragona telo.
Lalao Mahjong an-tserasera
Mahjong dia mbola lalaovina a lalao birao nentim-paharazana. Na izany aza, rehefa nanjary nalaza kokoa ny lalao an-tserasera, tsy niandry ela fa niseho tamin'ny Internet ny kinova Mahjong.
Androany, ny lalao amin'ny birao amin'ny kinova an-tserasera dia anisan'ny lalao malaza indrindra ary, amin'ny maha lalao kilalao azy, dia atolotra maimaim-poana. Ka izy lalao mahjong dia azo atao amin'ny lalao an-tserasera amin'ny karazany maro karazana miaraka amina karazana motifs isan-karazany. Ny kinova malaza indrindra amin'ny lalao nentin-drazana ankehitriny dia ahitana:
Mainty sy fotsy 2
Ny fitsipika fototry ny lalao dia izany ny sombintsombiny rehetra dia tsy maintsy diovina tsiroaroa amin'ny fotoana iray. Ny sisa ataonao dia tsindrio mpivady mifanentana (motera mitovy). Na izany aza, ny vato dia azo esorina raha tsy voasaron'ny vato hafa izy ireo.
Tsy maintsy mamela malalaka ianao amin'ny lafiny iray farafaharatsiny. Miankina amin'ny fomba hahitana ny vato, mazava ho azy fa mety hitranga izany, tsy misy mpivady intsony sarona. Tapitra ny lalao. Fehezin'ny totozy fotsiny ny lalao.
Ny tombony manokana amin'ny lalao Mahjong dia ny fampiroboroboana ny fisainana lojika fotsiny, fa koa fahaizana mifantoka sy mahatadidy.
Ny karazany samihafa amin'ny Mahjong
Araka ny firaketana an-tsoratra dia nitondra ny lalao tany amin'ny firenena andrefana ny mpivarotra sinoa. Fitsipika sy fomba samihafa amin'ny lalao no noforonina teto. Wholesaler JP Babock te hanatsotra ny lalàna izy ary izany no antony namoahany ny boky "Fitsipika ho an'i Mah-Jong"Vokatr'izany dia nanjary nalaza kokoa i Mahjong.
Ny kinova amerikana Mahjong dia novaina tsy tapaka ary samy hafa be amin'ny kinova voalohany. Ny fitsipiky ny kolontsaina tsirairay avy dia namboarina ihany koa tany amin'ny firenen-kafa toa an'i Japon na Great Britain. Ny kinova Hong Kong sy Canton amin'ny lalao dia lalaovina matetika kokoa ankehitriny.
Karazana Mahjong anio🀧
Hong Kong Mhjong na Cantonese Mahjong 🀄
Ny endrika fampiasa indrindra amin'ny lalao dia Hong Kong Mhjong na Cantonese Mahjong. Miaraka amin'ny noforonina ny efitrano filokana an-tserasera, nampiditra filokana tao amin'ny efitranony i Japon, namela ny mpilalao hilalao mifandray amin'ny hafa avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Nanjary nalaza kokoa ilay lalao, ary navoaka indray ny kinova vaovao amin'ilay lalao malaza.
Mahavariana, ny kinovan'ny sinoa tany am-boalohany dia tsy lalaovina any Chine intsony. Misy vitsivitsy ihany vitsy ny mpanaraka mahatoky any Andrefana.
Any Chine, ary koa any Hong Kong, ny kinova novaina amin'ny lalao dia malaza be. Ny hafa Ny fiovana taorian'ny taona 1930 dia nahatonga an'i Mahjong lalao filokana malaza. Tsy toy ny lalao kisendrasendra hafa, tsy afaka mandresy lalao Mahjong ny olona iray satria vintana fotsiny izy.
Mila ny lalao paikady, hafainganana ary famakafakana mpilalao hafa hahomby. Izany dia manome antoka an'i Mahjong fanjakana tsara sy manam-pahaizana kokoa noho ny lalao hafa.
Ny maha samy hafa an'i Mahjong dia afaka milalao irery ianao. Tsy maintsy esorinao daholo ireo taila mitovy mba ho lasa master Mahjong. Ny asanao dia ny mahita sy manafoana ireo singa mifanentana mba isa. Manomboka amin'ny sosona ambony sy ivelany, ary miasa mankany afovoany. Manomboha indray raha tsy misy hetsika mihetsika mety!
Fitsipika ofisialin'ny Mahjong
Raha te hilalao tsara an'i Mah Jong dia mila mahatakatra sy mampiditra ny fotokevitra lehibe ao anatiny ianao. Ireto ny lalàna ofisialin'ny Mahjong. Ny fampahalalana rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity dia nalaina avy amin'ny lalàna iraisam-pirenena mahjong.
Manantena izahay fa afaka manararaotra azy tanteraka ianareo. 🙂
Inona no ilainao raha manomboka milalao Mahjong ianao?
Vato 144 na 136 Mahjong
Fambara ao Mahjong
Mah Jong, dia lalao iray ahitana Fizarana 144. Amin'izy rehetra ireo dia misy litera sy marika sinoa maromaro mamela ny fahatsapana ny fitambarana isan-karazany. Ireto misy sangan'asa mahaforona lalao Mah Jong:
Ny taila ara-dalàna dia isaina hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 9, ary atambatra ho akanjo telo:
Boribory na baolina
Isaky ny karatra tsirairay dia misy efatra mitovy (izany hoe hanana, ohatra, karatra efatra an'ny tarehin-tsoratra telo). Ny mari-pamantarana mahazatra dia antsoina koa amin'ny anarana hafa:
Hatramin'ny chips Uno y Nine (1 sy 9) ny akanjo tsirairay avy dia antsoina koa hoe "ny terminal".
Ho an'ireo chip eo anelanelan'ny indray ary ny valo (2-8) isaky ny fitoriana dia fantatra amin'ny anarana hoe "tsotra".
Afaka mahita karazana chips roa manokana isika:
Toro-voninkazo sy vanim-potoana
Ireo taila ireo dia antsoina hoe manokana satria tsy mitovy isa amin'ny mahazatra.
Ny chips manome voninahitra dia matetika no sombina sarobidy indrindra amin'ny lalao, tsy vitan'ny lanja bebe kokoa, fa indraindray kosa dia ampitomboin'izy ireo ny sandan'ny isa iray manontolo.
Ireo mari-pamantarana ny voninkazo sy ny gara dia tsy maintsy aseho raha vantany vao lasa ianao, ary ampiasaina mba hahazoana teboka vitsivitsy fotsiny, ary haka token hafa indray. Tsy dia mirona amin'ny lalao loatra izy ireo, ka izany no iantsoana azy ireo hoe "chips bonus".
Betsaka ny fitsipiky ny Mahjong izay tsy mihevitra ny taila voninkazo sy vanim-potoana, manala azy ireo amin'ny lalao.
Anisan'ireo mari-pamantarana mendri-kaja isika afaka manavaka karazany roa:
amboadia: mena, maintso sy fotsy.
RIVOTRA MITSOKA: avy any Atsinanana, avy any atsimo, avy any Andrefana ary avy any Avaratra.
Toy ny amin'ny mari-pamantarana mahazatra, ny mari-panajana tsirairay dia averina inefatra (noho izany dia misy marika 4 an'ny South Wind, ohatra).
Farany, manana ny taila voninkazo sy vanim-potoana isika, izay manampy kofehy valo:
efatra Flores: mazàna manana ny piktogramy amin'ny manga na mainty izy ireo ary miisa mena.
efatra stations: saika manana ny piktogramy mena foana izy ireo, ary miloko manga na mainty.
Ny voninkazo sy ny vanim-potoana dia mifandraika mivantana amin'ny rivotra, ary ampiasaina amin'ny fanaovana isa ho mariky ny bonus mifandraika amin'ny rivotra tsirairay:
La voninkazo 1 ary ny gara 1, dia mifandraika amin'ny rivotra Este.
Voninkazo 2 ary ny gara 2, miaraka amin'ny rivotra amin'ny.
Rehefa miresaka momba ilay voninkazo isika voninkazo 3 ary ny gara 3, miaraka amin'ny rivotra Oeste.
La voninkazo 4 ary ny gara 4, miaraka amin'ny rivotra avaratra.
Ny tanjona amin'ny lalao dia mahazo isa betsaka araka izay azo atao ho azo amin'ny "Making Mahjong".
Raha te-hanao Mahjong ao amin'ny RCM dia mila manana ianao 8 farafaharatsiny (tsy ao anatin'ireo teboka voninkazo / vanim-potoana), noho izany dia mila mahafantatra tsara ny hetsika ianao.
Ny lalao Mahjong feno dia misy tanana na lalao 16, zaraina amin'ny boriborintany: 4 fihodinana 4 lalao tsirairay.
Na dia tanana na lalao 16 aza ny lalao feno, amin'ny ankamaroan'ny fifaninanana dia lalaovin'ny fotoana izy io. matetika, ny lalao dia 90 minitra na adiny 2.
Ny fihodinana tsirairay dia ampifandraisina amin'ny rivotra, izay ampiasaina hananganana ny isa amin'ny faran'ny lalao tsirairay, ary izay antsoina rivotra mahery:
Fihodinana voalohany: Rivotra atsinanana
Fihodinana faha-2: Rivotra atsimo
Fihodinana voalohany: Rivotra Andrefana
Fihodinana voalohany: Rivotra Avaratra
Ny rivotra isaky ny boriborintany dia tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny lalao fa ny isa fotsiny. Amin'ny faran'ny fihodinana tsirairay, a fanovana seza.
Fitsinjarana ny rivotra
Ny fizarana ny rivotra dia indray mandeha ihany, ary kisendrasendra, amin'ny fiandohan'ny lalao.
Ny rivotra tsirairay dia tendrena amin'ny toerana raikitra. Ny atsinanana dia tokony hanana ny atsimo amin'ny ankavanany, ny Avaratra amin'ny ankaviany ary ny Andrefana eo alohany.
Mariho fa tsy mifanaraka amin'ny famantarana kardinaly izany!
Miankina amin'ny rivotra nanohina azy ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy mipetraka araka izany toerana izany. Ny fizarana ny rivotra dia azo atao amin'ny fomba maro, fa ny tsotra indrindra dia:
Atsipazo ny dadu isaky ny mpilalao ary asio isa misy rivotra (1 = Atsinanana, 2 = atsimo, 3 = Andrefana, 4 = Avaratra ary 5,6 = Ahodina indray).
Mametraka ny sombin-drivotra tsirairay manatrika, ary ny mpilalao tsirairay misafidy sombin-javatra.
Alohan'ny lalao tsirairay
Ny rindrina dia misy 18 fakana de Tokana 2 avo, mamorona efamira, ary tsy maintsy hatsangana amin'ny fiandohan'ny tanan'ny tsirairay amin'ny lalao.
Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy manao ny anjarany amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny fanangonana tsipika 18 taila lava sy tile 2 avo, miatrika ambany daholo.
Raha vantany vao nanangana ny sisin'ny rindrina ny mpilalao tsirairay dia tokony ho efa-joro 18 x x 18 ny valiny.
Alohan'ny hizarana ireo mari-pamantarana, ilaina ny mahita ny lafiny amin'ny rindrina hanombohantsika ny fizarana.
Mba hanaovana izany, ny mpilalao Este hanomboka dice roa, izay hanondro ny sisin'ny rindrina hanombohana ny fizarana chips.
Raha te hahalala ny ampahan'ny rindrina manomboka ny fizarana dia isaina manomboka amin'ny Atsinanana ary manaraka ny filaharan'ny lalao (mifanohitra amin'ny famantaranandro). Noho izany dia hanomboka amin'ny faritra atsinanana amin'ny rindrina ianao raha mihodina amin'ny 5 na 9 amin'ny dice, amin'ny faritra atsimo raha mihodina 2, 6 na 10, sns.
Ao amin'ny ohatra asehontsika, ny mpilalao Atsinanana dia nanakodia 6 sy 5, manondro ny rindrina hisokatra amin'ny ilan'ny mpilalao Andrefana (6 + 5 = 11).
Ny mpilalao eo alohan'ny sakan'ny rindrina izay hanaovana ny fiatoana dia miandraikitra ny fitifirana ny hafa Dice roa izay hanondro ny sakana ny tile izay hanokafana ny rindrina (izany hoe ny sakana ahazoana ireo taila). Ao amin'ny ohatra asehontsika dia ny mpilalao West.
Ny fizarana puce dia ataon'ny mpilalao tsirairay avy mandray ny sakany puce.
Ny sakana fanombohana dia ho eo akaikin'ny isa ampahan'ny efatra dice atsipy (ny dice 2 hahalala ny sisin'ny rindrina izay manomboka ny fizarana ary ny dice 2 hafa hahafantatra ny sakana).
Manomboka izany manisa avy eo ankavanana kavia eo amin'ny sisin'ny rindrina asehon'ny dice roa voalohany (avy amin'ny fijerin'ny mpilalao izay eo amin'ny ilan'ny rindrina izay anaovany azy. Amin'ny antsika, ny mpilalao Andrefana). Raisiny ny sakana manaraka Ampio ny dice 4 amin'ny sakana.
Fanamarihana: Mariho fa mety ho ny tranga ny habetsaky ny dice 4 dia lehibe kokoa noho ny 18 (izay ny sakan'ny lafiny iray amin'ny rindrina). Amin'izay dia mitohy ny fanisana ny sakana voalohany amin'ny lafiny manaraka amin'ny rindrina mandra-pahatongan'ny totalin'ny dice.
Ao amin'ny ohatra asehontsika, ny Andrefana dia nanipy dice 2 hafa ary nisy ny 4 sy ny 5. Nohodinaina ny fizarana puce avy amin'ny sakana manaraka ny sakana 20 (6 + 5 + 4 + 5 = 20). Midika izany fa manomboka maka tile ianao amin'ny rindrina avy eo amin'ny sakana manaraka ny isa 20, manisa avy eo ankavanana kavia (avy amin'ny fijerin'ny mpilalao West) avy amin'ny sakana voalohany eo amin'ny sisin'ny mpilalao West.
Ny taila alohan'ny fiantombohan'ny tile fizarana dia ny taila farany amin'ny rindrina.
Ao amin'ny ohatra asehontsika, ny taila farany eo amin'ny rindrina dia ny taila ambony block 20 (amin'ny manga), ary ny sakana izay alaina ny taila dia ny sakana mena.
Ao amin'ny RCM tsy misy rindrina maty.
Ny mpilalao Atsinanana dia handray ny tokana roa voalohany famantarana (amin'ny totalin'ny marika 4).
Ny sakana misy ny marika farany dia matetika no mihodina (fa tsy ilaina) mba hanondroana mazava fa io lafiny amin'ny rindrina io no farany. Ity sakana ity dia azon'ny mpilalao alefaina rehetra (mazàna ny mpilalao eo alohan'ity sakana ity na ilay mpilalao Atsinanana tenany).
Avy eo handray ny sakana roa manaraka ny mpilalao atsimo.
Avy eo ny mpilalao Andrefana dia handray ny roa manaraka.
Avy eo ny mpilalao Avaratra ny sakana roa manaraka.
Aorian'izay dia omena sakana roa hafa ny mpilalao Atsinanana.
Ary toy izany hatrany mandra-pahatongan'ny mpilalao tsirairay dia naka ny polongany 4 an'ny taila 12 (izany hoe tamin'izany fotoana izany dia tokony hanana kofehy XNUMX ny mpilalao tsirairay).
Ary farany, ny mpilalao Atsinanana dia handray taila 2 (ny tile farany ambony amin'ny sakana misy loko mena).
Ary avy eo naka mpilalao 1 avy ny mpilalao atsimo, andrefana ary avaratra.
Amin'ny faran'ny fifanarahana dia samy hanana 13 chips ny mpilalao tsirairay, afa-tsy ny Atsinanana, izay hanana 14. Ny mpilalao izay Atsinanana dia hametraka ny dice amin'ny zony hanondro fa izy no Atsinanana.
Ny Sinoa Klasika dia manapaka ny fifanarahana amin'ny rindrina maty
El manakana avy aiza no hanombohana maka ireo chips dia ny sakana hita eo amin'ny toerana izay manondro ny fitambaran'ny dice telo nanakodia teo aloha.
Se manisa avy eo ankavanana kavia avy amin'ny fijerin'ny olona eo amin'io lafiny amin'ny rindrina io.
Ao amin'ny ohatra asehontsika, ny sakana fanombohana dia ny sakana 12 amin'ny lafiny avaratry ny rindrin'ny mpilalao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia manomboka maka taila avy amin'ny rindrina ianao avy amin'ny block 12, izay ny bloc mena ao amin'ilay sary.
Raha vantany vao fantatrao hoe aiza no hanombohanao haka ny taila, dia misy vondrona ny taila izay tsy azo ampiasaina hangalarana taila mahazatra mandritra ny lalao. Antsoina ireo famantarana ireo rindrina maty, ary izy ireo dia Tokana 14 (izany hoe, poloka 7) izay tsy mitondra afa-tsy fakana chips fanampiny.
foana tsy maintsy mijanona Famantarana rindrina maty 14. Noho izany, hihetsika ny rindrina efa maty satria nesorina ny taila fanoloana fanampiny. Raha tratra ny rindrina maty nefa tsy vita ny lalao dia hodinihina ny lalao nefa tsy nisy nandresy (antsoina ity toe-javatra ity null tanana).
Ao amin'ny ohatra asehontsika, dia ny taila 14 (7 blocks) miankavanana avy amin'ny tile vita amin'ny trano. Ireo no sakana manga.
Vantany vao tafapetraka ny sakana fanombohana dia manomboka ny fifanarahana puce. Ny mpilalao tsirairay dia samy maka ny sakamandron'izy ireo araka ny fanazavana etsy ambony *.
Alohan'ny hanombohana dia tsy maintsy tadidintsika fa misy fitambarana na hetsika miisa 3 ao Mahjong, saingy mba hahafahana mamorona azy ireo dia misy ny lalàna tsy maintsy arahana:
Izany dia 3-tile mahitsy mifanesy amin'ny akanjo mitovy (Ojo, Chips 3 marina, tsy misy tohatra misy chips 2 na 4).
Izy io dia tsy azo foronina fotsiny:
miaraka amin'ny fanariana ny mpilalao amin'ny ankavia
na miaraka amin'ny mari-pamantarana nalaina avy tamin'ny rindrina.
afa-tsy: Raha mila manao Chi fotsiny ianao hahazoana Mahjong dia azonao atao amin'ny tile iray narian'ny mpilalao rehetra (tsy mila ilay eo ankavia).
Izy io dia fitambaran'ny Tile telo mifanentana.
Izy io dia azo noforonina tamin'ny fanariana ny mpilalao rehetra.
Raha nampiharihary a Pung ary manintona avy amin'ny rindrina ianao famantarana mitovy amin'ny an'ny Pung, azonao atao ny manitatra ny Pung ary mamorona Kong. (Ojo, tsy azonao atao ny mamorona Kong amin'ity fomba ity amin'ny fanilihan'ny mpilalao hafa. Raha vantany vao mipoitra ny Pung, dia azo ovaina any Kong izany miaraka amin'ny famantarana azonao)
Raha manana taila 4 mifanentana eny an-tananao ianao, mba hahafahan'izy ireo manisa toy ny Kong dia tsy maintsy asehonao izany. Tokony apetrakao ambany ireo sangan'asa 4 (miafina, tsy fantatrao hoe inona izany) ary ambaranao hoe Kong. Ity Kong, izay nitazomana ireo mari-pamantarana 4 ary ny hira no hohiraina fa tsy aseho dia antsoina Kong miafina.
Ny fahatsapana ny lalao
Mifandimby ny lalao ary mandeha amin'ny lalana mitovy hatrany: mifanohitra amin'ny famantaranandro. Araho ny filaharana: Atsinanana-Atsimo-Andrefana-Avaratra-Atsinanana -..., sns.
Ity fahatsapana ny lalao ity dia arahina foana, afa-tsy rehefa misy mpilalao tsy handray anjara dia maniry ny hamafazana taila iray an'ny mpilalao hafa mba hanao Pung, Kong na Mahjong.
Amin'izay dia tapaka ny baiko ary hitohy ny lalao ho an'io mpilalao io, saingy hitohy indray izany amin'ny heviny izay nambarantsika tamin'io mpilalao io.
Ohatra, ny mpilalao Atsinanana manipy famantarana tadiavin'ny mpilalao Andrefana. Amin'izay dia tapaka ny fahatsapana (satria tokony ho anjaran'ny mpilalao atsimo), ary ny lalao dia harahan'ny mpilalao West, izay rehefa naka ilay tile vita nariana dia manipy ny iray amin'ireo taila nataony ary hitohy ho an'ny mpilalao Avaratra ny lalao. .
Aorian'ny fizarana ireo chips
Vantany vao nozaraina ireo mari-pamantarana, dia tsy maintsy aseho ny marika ny voninkazo sy ny gara misy ny mpilalao tsirairay avy, ary ny Kong mety (manaraka baiko iray).
Ny voninkazo sy ny vanim-potoana dia aseho aloha, avy eo ny Kong.
Manomboka amin'ny mpilalao Atsinanana ary miroso amin'ny làlan'ny lalao (Atsinanana-atsimo-Andrefana-Avaratra), ireo mpilalao dia manambara ny voninkazo sy ny vanim-potoana famantarana ananany, mametraka azy ireo eo alohany sy eo ankavanana.
Isaky ny Token voninkazo sy Seasons aseho dia samy maka famantarana vaovao avy amin'ny rindrina ny mpilalao tsirairay.
Ireo mari-pamantarana fanampiny nalaina avy tamin'ny rindrina ho an'ny voninkazo / fizaran-taona na Kong dia nantsoina fanoloana na chips fanampiny. Ny mari-pamantarana fanoloana dia alaina avy amin'ny sisiny faran'ny rindrina. Ao amin'ny ohatra asehontsika, noho ny sakana loko manga.
Raha misy ny taila vaovao dia taila Flowers and Seasons hafa, dia haseho izany ary ny tile hafa dia alaina avy amin'ny faran'ny rindrina, sns.
Tsy misy adidy mba hampisehoana avy hatrany na ny taila voninkazo / vanim-potoana na ny Kong. Izy ireo dia azo aseho amin'ny fotoana rehetra mandritra ny lalao raha mbola tsy vita ny lalao.
Ny lalao dia manomboka amin'ny fanilihana tile iray avy amin'ny mpilalao Atsinanana (tadidio fa ny Atsinanana dia manomboka amin'ny taila 14, raha ny sisa amin'ireo mpilalao kosa dia manomboka amin'ny 13).
Ny lalao dia novolavolaina manaraka ny dikany efa nohazavaina ihany, ary tapaka ihany rehefa misy mpilalao tsy manana ny anjarany teila ariana ariana hanary Pung, Kong na Mahjong. Avy eo dia hitohy indray ho an'io mpilalao io, manaraka ny fahatsapana ny lalao ihany.
Tapitra ny lalao rehefa ataon'ny mpilalao Mahjong na lany ny rindrina eo amin'ny rindrina.
Ario ny famantarana
Isaky ny manilika kapila iray ny mpilalao dia tsy maintsy apetrak'izy ireo eo anoloan'ny toerana misy azy (ary izany no hijanonana mandritra ny lalao sisa), ao anaty andalana misy taila 6 (ny laharana voalohany eo afovoan'ny latabatra sy ny manaraka akaiky teo).
Tsy misy antso nantsoina. Ireo fitambarana mifangaro miaraka amin'ireo sombin-javatra narian'ny mpilalao hafa ihany, ny voninkazo / gara na ny fanaovana Mahjong (manondro mazava ny Chi, Pung, Kong, Flower na Mahjong / Hu) no voalaza mafy.
Raha te haka token (ary afaka mandray azy ny mpilalao iray) dia tsy maintsy milaza izany izy raha vantany vao ariana, na dia tsy anjarany aza.
Ny tile iray ariana dia azo alaina mba hamoronana fitambarana fotsiny, izay tsy maintsy aseho an-tarehin'ireo mpilalao sisa ihany koa.
Fampitandremana! Tsy afaka maka taila nariana ianao mba hanangonana fotsiny, raha tsy mamorona lalao.
Raha vantany vao tsy nalain'ny olona ny taila iray nariana, dia tsy azo ampiasaina mandritra ny lalao sisa (izany hoe raha liana amin'ny tanana tile vita nariana isika taloha, dia tsy ho azontsika).
Isaky ny ariana tsirairay
Aorian'ny fanariana token, zavatra 3 no mety hitranga:
Ny mpilalao dia maniry ilay taila nariana namboarina hameno Pung na Kong na hanao Mahjong.
Tokony holazainao io raha vantany vao ariana ianao, na dia tsy anjaranao aza izany.
Tokony hampiharihary ny lalao amin'ny fomba izay mety ho hitan'ny mpilalao sisa mandritra ny lalao sisa.
Ankehitriny ny filaharan'ny lalao dia hitohy ho an'ity mpilalao ity, izay tsy maintsy manipy famantarana.
¡Ojo, ilay mpilalao manao taila nariana dia tsy afaka maka taila avy amin'ny rindrina! (Afa-tsy an'i Kong manao)
Raha manao Mahjong izy, dia avelany hivoaka ny taila voasarika izay akatony mandry ka mahaforona ilay fitambarana handresena azy:
Ny mpilalao eo ankavanan'ny fanariana dia maniry ny hamorona Chi.
Tokony hiteny izany raha vantany vao ariana.
Ary farany, ny mpilalao dia tsy maintsy manipy taila (Tadidio fa ny mpilalao manary taila nariana dia tsy maka avy amin'ny rindrina, raha tsy hoe mamorona Kong).
Samy tsy tadiavin'ireo mpilalao ilay famantarana.
Ny taila nariana dia tsy azo ampiasaina mandritra ny lalao sisa.
Ny mpilalao manaraka amin'ny filaharan'ny lalao dia haka taila avy amin'ny rindrina ary tsy maintsy manary taila hafa.
Miadia ho an'ny taila nariana
Raha mihoatra ny iray ny mpilalao mitaky marimaritra iraisana, ny filaharan'ny safidinao amin'ny fakana ny famantarana dia toy izao:
Mpilalao te hanao ilay famantarana Mahjong (o Hu).
Ho an'ny mpilalao mila ny mari-pamantarana a Pung na a Kong.
Ho an'ny mpilalao maniry ny famantarana hamorona a Chi.
Fanamarihana: Raha misy mpilalao roa na maromaro maniry ilay taila mitovy hanao Mahjong, ny mpilalao izay anjarany no mandresy voalohany amin'ny filalaovana lalao mahazatra. Mpilalao iray ihany no afaka mandresy.
Halatra taila iray nariana
Rehefa maninty sombin-javatra nariana iray ny mpilalao iray, dia tsy maintsy arodany ilay sombin-javatra nangalarina, apetrany amin'ny fomba iray hanondroana hoe iza no nanome azy.
Ohatra, raha misy mpilalao manao sary famantarana narian'ny mpilalao eo ankaviany (iray amin'ny volotsangana 3 na kapila 9), tsy maintsy avelanao hivadika ilay tsikombakomba ka avadika ary apetraka eo ankavia:
Raha misy mpilalao manintona ny marika narian'ny mpilalao eo alohany (Discs 9), tsy maintsy avelanao hivadika ilay tsikombakomba raha mivadika ilay taila nangalarina ary napetraka eo afovoany.
Raha misy mpilalao manintona ny marika narian'ny mpilalao eo ankavanana (Discs 9), tsy maintsy avelanao hivadika ilay tsikombakomba ka avadika ary apetraka ankavanana ny taila nangalarina.
Rehefa avy namorona fitambarana voasintona niaraka tamin'ny token narian'ny mpilalao iray hafa, dia tokony havela ho hitanao mandritra ny lalao sisa io fitambarana io amin'ny ampahany marina an'ny mpilalao namorona azy.
Izany hoe, na ny felam-boninkazo / ny gara na ny Kong, ary koa ny fampifangaroana ireo taila nariana, dia avela eo ankavanan'ny mpilalao tsirairay.
Amin'ny faran'ny lalao
Manisa ireo hevitra
Raha lany ny rindrina ary tsy misy mandresy dia vita ny lalao. Ireo karazana lalao ireo dia antsoina null tanana.
Etsy ankilany, raha manao Mahjong ny mpilalao iray dia tsy maintsy manisa mafy ny heviny rehetra (eny fa na dia ny isa ho an'ny voninkazo aza), maka ny taila nariany isaky ny mitambatra na tile izay misy isa (isaky ny teboka iray dia kapila nariana na isaky ny 10 isa ny taila iray nariana ambany).
Voalohany, nampiana ireo isa isaky ny lalao, mba hanazavana mazava fa tratra ny isa 8 farafahakeliny. Avy eo ampiana ireo isa ho an'ny voninkazo.
Atao io mba hanazavana ny kajy ambony latabatra fa tsy mila mampiasa pensilihazo sy taratasy ho an'ireo kaonty.
Ohatra, raha nahazo isa 12 ny mpilalao (manisa ireo isa voninkazo) dia tokony haka mari-pahaizana 12 amin'ny fanariany izy:
Mety ho naka taila 3 koa izy (1 nidina ny ambany = 10 isa, 2 miakatra ambony = isa 1 avy)
Fanamarihana: Raha vantany vao miteny ny mpilalao iray hoe Mahjong ny mpilalao iray dia tsy tokony asehon'ireo mpilalao hafa ny taila na hamorosany ireo taila nariana mandra-panisana ny isa rehetra.
Vantany vao vita ny lalao tsirairay (na misy mandresy na raha tsy misy tanana), dia mihodina ny rivotra mifandraika amin'ny mpilalao tsirairay (ny rivotra, fa tsy ny mpilalao, raha tsy mifarana ny boribory).
Ny mpilalao atsinanana lasa avaratra, ny atsimo lasa atsinanana, ny atsimo lasa atsimo ary ny avaratra ho any andrefana.
Amin'ny faran'ny fihodinana tsirairay
Amin'ny faran'ny fihodinana tsirairay, ankoatry ny fihodinan'ny rivotra, misy ny fifanakalozana eo amin'ny toeran'ny mpilalao. Ny fikasana amin'ireo fanovana seza ireo dia ny hahazoana antoka fa samy nilalao sy niankavia ny mpilalao tsirairay nandritra ny lalao.
Amin'ny faran'ny fihodinan'ny rivotra atsinanana sy alohan'ny hanombohana ny fihodinan'ny rivotra atsimo, ny mpilalao izay ho any Atsinanana indray izao ary ilay ho any atsimo dia takalo ny sezany. Ireo mpilalao Andrefana sy Avaratra koa dia mifanakalo ny sezany.
Amin'ny faran'ny fihodinan'ny rivotra atsimo sy alohan'ny hanombohana ny fihodinan'ny rivotra andrefana, ny mpilalao izay ho Atsinanana izao dia handeha amin'ny toeran'ny mpilalao Andrefana, ny atsimo mankany amin'ny mpilalao avaratra, ny mpilalao Andrefana ho any atsimo ary ny Avaratra ho any Atsinanana.
Amin'ny faran'ny fihodinan'ny rivotra andrefana sy alohan'ny hanombohana ny fihodinan'ny rivotra Avaratra, ny seza misy azy ireo dia mifanakalo eo amin'ny mpilalao izay ho lasa Atsinanana sy ilay ho any atsimo. Toy izany koa, ireo mpilalao Andrefana sy Avaratra dia hanova ny sezany.
Mety ho sahiran-tsaina tokoa izy io (ary izany), saingy amin'ity fomba ity dia manova ny mpifanandrina aminy miankavia sy miankavanana ny mpilalao rehetra, ka manakana ny fisintahan'ny rivotra amin'ny fiandohan'ny lalao tsy hanisy marika ny mpiara-monina amintsika amin'ny lalao iray manontolo.
Fanamarihana: Fomba iray hahafantarana raha efa natao tsara ny fanovana seza dia ny mpilalao nahazo ny atsimo rehefa nisoroka ny rivotra dia tokony ho mpilalao Atsinanana tamin'ny fiandohan'ny fihodinana atsimo. Izay nahazo Andrefana dia tokony ho Atsinanana rehefa manomboka ny fihodinana Andrefana, ary izay nahazo ny Avaratra dia tokony ho rehefa manomboka ny fihodinana Avaratra.
Asehoy ireo voninkazo voalohany
Ny mpilalao tsirairay kosa dia tokony hanondro raha manana voninkazo izy ireo (amin'ny fiantsoana hoe "Voninkazo" na "Voninkazo") na tsy fananany voninkazo ("Tsy manana aho", "Tsy manana voninkazo aho" na "Tsy misy voninkazo"). Aorian'ny fakana ireo mari-pamantarana voninkazo eo amin'ny faran'ny rindrina dia tsy maintsy miantso ny mpilalao tsirairay avy fa tsy manana voninkazo intsony izy ireo ("Tsy misy voninkazo intsony" na "Tsy misy voninkazo intsony").
Ny mpilalao Este Izy dia manana Flowers and Seasons Token, ka hasehony izany amin'ny avelany eo ankavanany ary haka famantarana hafa avy amin'ny faran'ny rindrina (mahazo Discs 5 izy). Raha vantany vao nandray ny marika fanampiny izy dia tokony hiteny mafy ilay mpilalao Atsinanana fa tsy manana voninkazo intsony izy.
Rehefa anjaran'ny mpilalao amin'ny Tokony hiteny mafy aho fa tsy misy voninkazo izany.
Toy ny any Atsinanana, ny mpilalao Oeste, manana mari-pamantarana voninkazo sy vanim-potoana (manana marika voninkazo 2 izy), ary rehefa maka ny taila fanampiny avy amin'ny rindrina dia hivoaka ny taila roa mitovy amin'ny 2 an'ny Karakter. Rehefa avy nanao sary ny taila fanolo dia nilaza ny Tandrefana fa tsy manana voninkazo intsony izy.
Avy eo dia anjaran'ny mpilalao avaratra. Tsy misy voninkazo koa izy io, noho izany dia hiteny mafy aho hoe tsy misy voninkazo.
Manomboka ny lalao
Ny mpilalao Atsinanana no voalohany manary tile. Ahodin'ilay mpilalao Atsinanana ilay tandindona volotsangana 3, apetraka eo imasony:
Koa satria tadiavin'ny mpilalao atsimo ilay marika volotsangana 3 ary tsy misy mangataka azy intsony dia raisiny ary manangana Chi (2-3-4 an'ny Bambu) izy, avelany eo ankavanany eo imasony ary mihodina ny 3 Bambu (miala ny famantarana eo ankavia manondro fa ilay mpilalao amin'ny ankaviany, ny Atsinanana, no nanipy azy).
Koa satria nariana ny atsimo dia tsy afaka mangalatra amin'ny rindrina izy. Ankehitriny dia tsy maintsy manary toky izy ary mihodina ny boriborintany 9.
Na izany aza, ny marika 9 an'ny Circles dia mahaliana ny mpilalao Avaratra hanangana Kong. Noho izany, ho afaka ny anjaran'ny mpilalao Andrefana, ary hampiseho ny fihetsiny ilay mpilalao avaratra (tsy maintsy asehony an'ity Kong ity, satria tsy takona afenina), mamadika ny iray amin'ireo Bambu 9's eo afovoan'ny fitambarana (hatramin'ny nanipazany azy ny mpilalao eo alohany, ny atsimo) ary handray famantarana fanampiny avy any amin'ny faran'ny rindrina (satria aorian'ny fananganana Kong dia tsy maintsy alaina avy amin'ny faran'ny rindrina ny marika fanampiny). Nahazo Karatra 7 izy.
Na dia anjaran'ny mpilalao avaratra aza izao ny manipy token dia manapa-kevitra ny hampiseho Kong miafina izy (noho izany dia avadiny ny marika 4) ary handray famantarana fanampiny hafa izy.
Rehefa avy naka ny mari-pamantarana avy teo amin'ny rindrina izy (nahazo ny Boriboritany 1), ny mpilalao Avaratra dia tokony hanary toky, aorian'izay, raha tsy mahaliana ny olon-kafa izany dia hilalao ilay mpilalao Atsinanana, maka token amin'ny rindrina, sns. Tapitra ny lalao rehefa nanao Mahjong ny mpilalao iray na lany avokoa ny taila (tsy misy tanana).
Milalao sy ny naotiny
Ao amin'ny RCM dia misy lalao 81, isa manomboka amin'ny isa 1 ka hatramin'ny 88 isa. Ilaina izy ireo 8 afaka manao Mahjong.
Raha toa ny mpilalao iray mihidy miaraka amina puce iray narian'ny hafa, dia azony avy tamin'io mpilalao io ny isa azony, ankoatra ny isa fanampiny 8 avy amin'ny mpilalao rehetra (ao anatin'izany ilay nanipy ilay puce afaka mamela azy).
Raha mikatona amin'ny tile vita amin'ny rindrina izy dia manampy teboka 8 amin'ny isa azony ary mandray izany vola izany avy amin'ireo mpifanandrina 3 rehetra.
hanary Avy amin'ny rindrina
Discarder Hevitra mpandresy + 8 -
HAFA 8 -
rehetra - Hevitra mpandresy + 8
Fitsipika ankapobeny amin'ny fitambaran'ny lalao
Fanamarihana lalao izay misy ny hafa
Rehefa tsy azo atao ny tsy mihetsika raha tsy misy ny iray hafa, ny hetsika efa tafiditra dia tsy ho tafiditrana.
Fitsipika fanilihana na fandrarana ny fampiasana lalao miverimberina
Raha fitambarana roa na telo no ampiasaina handehanana, ny be indrindra amin'ny iray amin'ireto tsikombakomba ireto dia azo ampiasaina amin'ny fampiarahana hafa ary mamorona hetsika vaovao.
Azo ampiana izy ireo: isa 1 ho an'ny Chis End of Rotsaka Roa, 1 isa ho an'ny Chis End Endra-toetra Roa ary isa 1 fotsiny ho an'ny Mixte Chow Double (1-2-3 an'ny Bambu ary 1-2-3 an'ny Karakter). Tsy azo atao ny mampiasa 7-8-9 an'ny Bamboo sy ny tarehin-tsoratra 7-8-9 ho an'ny teboka iray hafa avy amin'ny Mixed Double Chow, satria efa nampiasainay ny iray amin'ireo fampifangaroana ny play The Terminal Pure Pure (ny 1-2 -3, samy ho an'ny Bamboos sy ny endri-tsoratra).
Milalao an-tanana miafina
Amin'ny lalao izay nafenin'ny natiora dia tsy nampiana isa ho an'ny tanana miafina na dia azo ampifangaroina amin'ny tanana miafina tanteraka aza izy ireo.
Ireto misy tantara an-tsehatra dia: Tiles stitched with Low Honors, Stitched tile with Great Honors, 7 Pairs, 4 Hidden Pung, Nine Gates, 7 Pure Pure Pairs and 13 Orphans.
Kong Exposed roa dia isa 4.
Kong Exposed miaraka amin'ny Kong Hidden dia mitentina 6 isa.
Kong Hidden roa dia sanda 8.
1. Chi Chi Double
Tohatra roa mitovy akanjo sy filaharana mitovy isa.
2. Chi Mixed roa
Tohatra roa misy palitao roa samy hafa, fa mitovy ny filaharana.
3. Tohatra fohy
Chis roa mitovy amin'ny akanjony, miaraka amina laharana misesy.
4. Chis Terminal roa madio
Tohatra 1-2-3 sy 7-8-9 an'ny palitao mitovy.
5. Pung of Terminals na Rivotra
Tanana misy zana-kazo lava (Kaontera 1 sy 9) na Rivotra, hafa noho ny Rivotra Manokana na ny Rivo Manjaka (Rivotra manodidina)
Kong dia nahazo tamin'ny token nariana na tamin'ny fanampiana token tamin'ny Pung efa naseho. Fanamarihana: ny fanariana tsy azo sintomina hanitatra Pung miharihary.
7. Fianakaviana tsy eo
Tanana iray izay tsy misy chip ho an'ny 1 amin'ireo karazana akanjo 3. Izany hoe, tanany miaraka amina palitao 2 fotsiny. Izy io dia afaka mitondra Voninahitra.
8. Tsy misy haja
Tanana iray vita amin'ny marika famantarana ihany, tsy misy mari-pamantarana Honors. Izany hoe, tsy misy Rivotra na Dragona.
Miandry ny 3 na 7 hamorona Chi miaraka amin'ny 1-2 na 8-9. Ity tanana ity dia tsy mitombina raha ampiarahina amin'ny karazana Wait hafa (ohatra, ny fiandrasana hanidy amin'ny 7-7-8-9 chips dia heverina ho fitambaran'ny Edge Wait sy Simple Wait, satria azo heverina fa ny 7 dia ny endrika 7-8- 9 na ny mpivady 7-7).
Fanamarihana: Ireo teboka mitazona dia omena rehefa ilaina ny famantarana tokana.
Ohatra, miandry ny hikatona miaraka amin'ny Bambu 7 miaraka amin'ny:
10. Andraso Mihidy
Farano amin'ny fiandrasana mihidy (ohatra, manana 2-4 ary miandry 3). Ity tanana ity dia tsy mitombina raha atambatra amin'ny karazana fiandrasana hafa (ohatra, ny fiandrasana hanidy amin'ny 2-2-2-4 chips dia heverina ho fitambaran'ny Closed Wait sy Simple Wait, satria samy manompo 3 sy a 4). Na izany aza, ny fampifangaroana Waits on (ohatra, 6-7-7-8-9 sy ny fiandrasana 8 dia heverina ho fitambaran'ny Edge Wait sy Closed Wait, fa ny token 8 ihany no manidy azy).
Ohatra, raha toa ka azo fehezina miaraka amina boribory 5 misy:
11. Miandry tsotra
Hidio miaraka amin'ilay karatra mamorona ny mpivady. Ity hetsika ity dia tsy mitombina raha ampiarahina amin'ny karazana fiandrasana hafa (ohatra, ny fiandrasana hikatona amin'ny chip 2-2-2-4 dia heverina ho fitambaran'ny Closed Wait sy Simple Wait, satria samy manolotra 3 sy a 4). Tsy ekena ihany koa raha safidy roa no antenaina hikatona miaraka amin'ny mpivady (ohatra, 6-7-8-9 ary manantena 6 na 9).
12. Akatona ny rindrina
Akatona miaraka amina marika azo avy tamin'ny rindrina.
13. Tondra-voninkazo sy vanim-potoana
Ny voninkazo tsirairay dia mendrika isa 1. Izy ireo dia isaina amin'ny faran'ny isa amin'ny isa rehetra. Tsy manome ny isa farafahakeliny isa 8 ry zareo. Izy ireo dia azo aseho isaky ny tianao. Ajanona eo amin'ny ilany ankavanana izy ireo (toy ny sisa mihetsika sy ny taila hita) ary misy taila vaovao alaina amin'ny faran'ny rindrina. Raha mikatona ny mpilalao amin'ny marika vaovao dia ampiana teboka iray hanidiana ny rindrina.
Milalao teboka 2
Pung (na Kong) an'ny dragona. Mety hafenina na hampiharihary izany.
15. Pung Wind Wind
Pung (na Kong) an'ny rivotra manjaka, izay mifanitsy amin'ny rivotry ny boribory. Azo afenina na aseho izy io.
16. Tenin'ny rivotra
Pung (na Kong) ny rivotra ihany Azo afenina na aseho izy io.
17. Tanana miafina
Ataovy miafina ireo fangaro rehetra ary afatory amin'ny taila nariana.
18. Chi rehetra
Tanana izay tsy misy an'i Chis fotsiny ary tsy manana Voninahitra.
Milalao teboka 4
19. Takelaka voatahiry
Ampiasao ny taila 4 an'ny taila iray omena azy, nefa tsy ambara hoe Kong (izany hoe mampiasa azy io mba hanaovana hetsika hafa). Kong izay miafina na miharihary dia tsy isaina ho Hoard Token.
20. Pung roa mifangaro
Ny tànana dia misy Pung na Kong roa mitovy isa (saingy hita fa samy hafa palitao).
21. Pongo miafina roa
Ny tanana dia misy vatan-doha roa izay mbola tsy naseho (izany hoe tsy noforonina tamin'ny taila nariana). Kong tsy takona dia tsy mendrika Pung miafina.
22. Kong miafina
Tanana misy taila 4 mifanaraka, tsy misy ariana ireo, ary efa nambara fa Kong. Mihodina ny tile rehetra.
23. Tsotra rehetra
Tanana tsy misy mari-pamantarana Terminal na mari-pamantarana Honor. Tsotra daholo ny chips rehetra eny an-tànany (chips 2-8).
24. Tananan'ny terminal sy ny voninahitra havaozina (Miaraka amin'ny haja sy / na terminal) rehetra.
Tanana izay ahitana fantsom-pifandraisana Terminal farafahakeliny farafahakeliny isaky ny mitambatra, ao anatin'izany ny mpivady.
Milalao teboka 6
25. Tanana miafina tanteraka
Tanana iray vita tamin'ny tile rehetra nalaina avy amin'ny rindrina, ao anatin'izany ny mpivady.
26. Kong roa voarohirohy
Ny tanana dia misy Kong roa aseho.
27. Tab farany
Akatona miaraka amina tile iray nariana izay farany amin'ireo karazana tavela (ohatra, raha toa ka efa nanao izany izy ireo
nariana na nampiasain'ny mpilalao hafa tao anaty tsikombakomba miharihary sombin-javatra telo amin'ny 4 an'ny Bambu, manakaiky ny faritry ny 4 an'i Bambu) Tsy azo ampiarahana amin'i Kong Robo.
28. Pung rehetra
Tanana noforonin'i Pung 4 (na Kong) sy izy roa.
29. Tanana Semipura (Tanan-tànana Madera misy Voninahitra)
Tanana misy puce ao amin'ny iray amin'ireo akanjo telo, miaraka amina puce Honors.
30. vazivazy mifangaro miisa telo
Tanana iray izay misy Chis telo amin'ireo palitao telo, ary ny chips anombohany dia ao anatin'ny elanelana miakatra iray.
Milalao teboka 8
31. Fianakaviana sy voninahitra rehetra
Tanana noforonin'ny tsikombakomba izay isehoan'ny mari-pamantarana an'ireo karazany 5 izay ao amin'ny lalao. Ireo akanjo telo: Character, Discs, Bamboos, miampy Winds and Dragons.
32. Tanana miharihary
Tanan-tanana iray izay nahavitana ny tsikombakomba rehetra niaraka tamin'ny chips nariana n'ny mpilalao hafa, ao anatin'izany ny mpivady. Azo ampiarahina amin'ny teboka Miandry.
33. Dragona roa
Ny tanana dia misy Pung (na Kong) Dragons roa.
34. Kong roa miafina
Tanana izay misy Kong roa izay mbola tsy naseho.
35. tohatra mifangaro
Mahitsy (taila avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 9) noforonin'i Chis amin'ireo akanjo telo ireo. Afaka atambatra amin'ny Todo Chi.
36. Ny fitaratra
Tanana voaforona fitambarana namboarina tamin'ny taila izay simetrika mitsangana (izany hoe ireo tile izay mitovy endrika no miakatra sy midina: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 an'ny Discs, 2, 4, 5, 6 , 8, 9 an'ny Bambúes sy ilay Dragon Mainty). Ny teboka ho an'ny fianakaviana tsy eo dia tafiditra ao.
Tanana misy Chis telo mitovy, fa akanjo samy hafa.
38. Pung stanggered telo mifangaro
Ny tanana dia misy Pung na Kong telo, samy manana palitao samihafa ary isa lehibe kokoa noho ny Pung teo aloha.
39. Tanana foana
Tanana izay tsy misy teboka. Ny isa ho an'ny voninkazo dia tsy isaina amin'ity isa ity. Ny voninkazo dia ampiana aorian'ny isa 8 handresena.
Ny fanakatonana, ohatra, amin'ny fanariana ny 3 Bambu (tsy ny tapany farany an'ny 3), ary tsy hoe tanana miafina na tanana mirongatra. Tanteraka araka izany fa tsy i All Chi, na i All Pung, tsy misy teboka ho an'ny Miandry, na ho an'ny Pung of Terminals na Honours, na ho an'ny Last Token, sns.
40. Vato farany amin'ny rindrina
Hidio miaraka amin'ny taila farany amin'ny rindrina. Tsy azo atambatra amin'ny Close the Wall.
41. Ario ny famantarana farany an'ny rindrina
Akatona miaraka amin'ny fanariana ny taila farany amin'ny rindrina.
42. Farano miaraka amin'ny Extra Kong Token
Farano miaraka amin'ireo marika fanampiny nalaina taorian'ny nahazoanao Kong.
43. fangalarana Kong
Manakatona miaraka amin'ny marika nangalarina tamina mpilalao iray izay nandalovany avy tany Pung ka hatrany Kong. Tsy azo atambatra amin'ny Tanana miafina tanteraka.
Milalao teboka 12
44. Famantarana miavaka amin'ny haja vitsivitsy
Tanana vita amin'ireto taila ireto: Voninahitra 5 na 6 (tsy ampiarahina) miaraka amina zana-kazo 8 na 9 namboarina Miaraka amin'ireo mari-pamantarana 7 Voninahitra dia antsoina hoe Sewn Tokens miaraka amin'ny Grand Honors ny lalao. Ny tanana dia tsy maintsy afenina, na dia tsy mila takona tanteraka aza, izany hoe azo esorina ny taila nariana. Tsy azo atambatra amin'ny fianakaviana rehetra na tanana miafina.
45. Tanjona manjaitra
Lalao manokana misy puce 1-4-7 amin'ny palitao iray, 2-5-8 amin'ny akanjo hafa ary 3-6-9 amin'ny palitao fahatelo. Ny tanana dia tsy mila takona afenina (mazava ho azy fa azo esorina ny fanariana raha tsy hoe manidy ny fitambarana fahefatra fa tsy ho an'ny taila nozairina). Afaka atambatra amin'ny Todo Chi.
46. ​​Ilay ambony 4
Tanana izay tsy manana afa-tsy chip 6 ka hatramin'ny 9. Ampidirina ao ny teboka No Honor.
47. Ilay ambany 4
Tanana izay tsy manana afa-tsy chip 1 ka hatramin'ny 4. Ampidirina ao ny teboka No Honor.
48. Rivotra mahery telo
Ny tànana dia misy pung Wind na Kong.
Milalao teboka 16
49. tohatra madio
Tanana noforonin'ny poti-bokatra 1-9 mahitsy amin'ny akanjo itoviana, namorona Chis 3 nisesy.
50. Chis Extreme an'ny Fianakaviana 3
Tanana misy Chows 1-2-3 sy 7-8-9 an'ny palitao iray, Chows 1-2-3 ary 7-8-9 an'ny palitao hafa ary mpivady 5 amin'ny suit fahatelo. Ny isa ho an'ny Mixed Double Chi, Chis Terminal roa, tsy misy haja ary All Chi dia efa tafiditra ao.
51. Chis telo madio madio
Tanana vita amin'ny Chis telo mitovy palitao, izay samy manana ny fiandohany manomboka amin'ny isa na roa lehibe kokoa noho ilay sombin'ilay Chi teo aloha, fa tsy mifangaro amin'izy roa (izany hoe, na ireo Chis telo dia miaraka amina singa manomboka. elanelam-potoana iray na telo Chis dia ao anatin'ny elanelam-potoana roa).
52. Miaraka amin'ny 5 izy rehetra
Tanana iray izay ahitàna ny fifangaroana 5 (ao anatin'izany ny mpivady).
53. Pung Triple mixte
Tanana misy Pung (na Kong) mitovy telo, fa ny palitao samy hafa samy hafa.
54. Pung miafina telo
Tanana izay misy Pung telo tsy voalaza (Kong miafina tsy isaina).
Milalao teboka 24
Tanana vita amin'ny chips fito tsiroaroa. Mifarana foana amin'ny fiandrasana tsotra. Ny taila iray nariana dia azo sintomina hamaranana ny lalao. Tsy azo ampifangaroina amin'ny Pairs All (Pung of), tanana miafina na tanana tsotra mitazona. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny fianakaviana rehetra, tanana miafina tanteraka, famantarana mitazona, tsy misy haja, tsotra rehetra, fianakaviana tsy hita 1, terminal rehetra, na voninahitra rehetra.
56. Teboka nozairina am-boninahitra lehibe
Tanana vita amin'ny tsirairay amin'ireo voninahitra fito (tsy misy famerimberenana) sy taila avy amin'ny akanjo telo izay mandrafitra ny filaharanao amin'ny taila fito voahitsoka (izany hoe misy taila fito amin'ny sivy izay mandrafitra ny taila voaravaka: taila 1- 4-7 amin'ny palitao iray, 2-5-8 amin'ny palitao hafa ary 3-6-9 amin'ny akanjo fahatelo). Tsy maintsy afenina ny tanana. Tsy azo atambatra amin'ny tanana: Fianakaviana rehetra, tanana miafina na fiandrasana tsotra.
57. Ny mpiara-mianatra rehetra (Ny paositry ny mpiara-mianatra rehetra)
Tanana noforonin'i Pung na tile aza (ao anatin'izany ny mpivady). Ny isa ho an'ny Pung rehetra, tsy misy haja ary All Simple dia efa tafiditra ao. Azo ampiarahina amin'ny fianakaviana tsy misy na tanana madio.
58. Tanana Madio
Tanana misy puce iray mitovy akanjo sy tsy misy Voninahitra. Ny isa avy amin'ny tanana No Honor dia misy.
59. Triple Chi mitovy
Chis telo mitovy sy itovizany. Tsy azo ampiarahina amin'ny tanana Pung Consumer.
Milalao teboka 32
60. Pure Pung telo misesy
Tanana miaraka amin'ny Pung (na Kong) telo mitovy palitao, izay samy manana isa lehibe kokoa noho ny iray farany noho ny farany. Tsy azo ampiarahana amin'ny Triple Chi Identical.
Tanana misy fitambarana taila 7, 8 ary 9 (ao anatin'izany ny mpivady). Misy isa ho an'ny tsy manome voninahitra. Azo ampiarahina amin'ny All Pung, Family absent na tanana madio.
62. Takelaka afovoany
Tanana misy fitambarana taila 4, 5 ary 6 (ao anatin'izany ny mpivady). Misy isa ho an'ny tsy manome voninahitra. Azo ampiarahina amin'ny All Pung, Family absent na tanana madio.
63. Takelaka ambany
Tanana misy fitambarana taila 1, 2 ary 3 (ao anatin'izany ny mpivady). Misy isa ho an'ny tsy manome voninahitra. Azo ampiarahina amin'ny All Pung, Family absent na tanana madio.
64. Chis efatra madio madio
Tanan'ny Chis efatra mitovy amin'ny palitao mitovy, ny tsirairay miaraka amin'ny sombin-javatra manomboka dia nihena isa na roa isa momba ny fiandohan'ny Chi teo aloha.
Milalao teboka 48
Tanana misy an'i Kong telo. Izy ireo dia azo afenina na aseho.
66. Ny haja sy ny terminal rehetra
Tanan-tanana misy ny Terminal rehetra (kaontera 1 sy 9) sy ny voninahitra (Rivotra sy dragona). Tsy misy isa fanampiny azo avela ho an'ny filalaovana Winds sy Terminal. Ny isa ho an'ny Pung rehetra, Terminal Pung ary honors Pung dia tafiditra ao. Azo ampiarahina amin'ny Tanan-tànana Madio, fianakaviana tsy eo, dragona roa, dragona kely telo, dragona telo lehibe, rivotra telo, rivotra kely efatra, na rivotra mahery efatra.
67. Quadruple Chi Mitovy
Tanana noforonin'i Chis efatra mitovy amin'ny itoviana. Misy isa ho an'ny Pung Staggered Pure, Hoard Token, ary Pure Double Chi.
68. Taolana efatra madio madio
Tanana iray izay misy Pung efatra na Kong mitovy amin'ny akanjony, tohanan'ny iray.
70. Rivotra kely efatra
Tanana izay misy tafiotra Pung (na Kong) telo ary tsiro-drivotra sisa tavela. Azo ampiarahina amin'ny Rivotra Dominikanina sy Rivotra Manokana. Misy teboka telo momba ny Rivotra Lehibe.
71. Dragona kely telo
Tanana iray izay ahitana Pung (na Kong) roa an'ny Dragons, ary ny iray an'ny Dragon iray hafa. Ny isa isaky ny Pung an'ny dragona tsirairay dia tsy isaina.
72. Ny voninahitra rehetra
Tanana vita amin'ny Voninahitra (Rivotra sy / na Dragons) manontolo. Izy io dia azo foronina amin'ny Pung na Kong, miafina na aseho. Azo atambatra amin'ny Dragon Pung. Ampidirina ny teboka Todo Pung.
73. Pao miafina efatra (Harena miafina)
Tanana izay misy Pung (na Kong) efatra tsy voarindra. Tsy azo ampiarahina amin'ny tanana miafina tanteraka na ny pao rehetra.
Tanana vita amin'ny Chis ambany roa (1-2-3), Chis ambony roa (7-8-9) ary mpivady 5, mitovy akanjo daholo. Ny isa ho an'ny tanana madio, mpivady fito, ny fiatoana ny akoho ary ny henan-tsakafatra madio dia ao.
Milalao teboka 88
75. Rivotra mahery efatra
Tanana noforonin'i Pung (na Kong) amin'ireo Rivotra efatra. Tsy azo ampiarahina amin'ny Pung rehetra na Wind Wind na Pung Wind Self.
76. dragona lehibe telo
Tanana noforonin'i Pung (na Kong) an'ny Dragons 3. Tsy azo atambatra amin'ny Dragon Pung.
77. Maitso rehetra
Tanana misy taila volom-borona 2, 3, 4, 6, 8 ary raha tsy izany, Green Dragons. Azo ampiarahina amin'ny tanana madio, tanana madio mangalahala (raha dragona maintso no ampiasaina), tsiroaroa 7, tanana miafina tanteraka, pao rehetra na tsotra rehetra.
78. Varavarana sivy
Tanana noforonin'ireo puce 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 an'ny palitao mitovy aminy, manao mpivady amin'izy ireo. Tsy maintsy afenina ny tanana. Tsy azo ampiarahina amin'ny tanana miafina, tanana madio, na fantsom-panafody ary voninahitra. Azo atambatra amin'ny Tanana miafina tanteraka.
Izay tanana misy 4 Kong. Izy ireo dia azo afenina na ampiharihary.
Tanana noforonina tamin'ny karazan-trondro fito an'ny akora iray ihany izay isan'ny iray mihombo amin'ny isa. Tsy azo ampiarahina amin'ny tanana madio, tanana miafina tanteraka na fiandrasana tsotra.
81. Kamboty telo ambin'ny folo
Tanana misy taila 1 sy 9 an'ny Bamboos, 1 sy 9 an'ny Discs, 1 sy 9 an'ny Karakter, ary ny tsirairay amin'ireo haja fito. Ny mpivady dia vita amin'ny chips rehetra. Ny taila iray nariana dia azo sintomina hamaranana ny lalao. Tsy azo ampiarahina amin'ny tanana madio, tanana miafina tanteraka, na fitazanana tsotra.
Fanosihosena sy sazy
Raha manao fahadisoana ny mpilalao iray rehefa manambara Chi, Pung, Kong na mandray ny mari-pamantarana, dia very ny zony handresy ny lalao (tanana maty), na dia afaka manohy milalao aza ianao, mangalatra fanariana sns.
Tsy afaka mangataka fanariana ny mpilalao ary avy eo manova ny heviny. Amin'ny fotoana voalohany hampandrenesana anao dia amin'ny fotoana faharoa voasazy amin'ny 5 (homena ny mpilalao tsirairay), ny fahatelo 10, ny fahefatra 20, sy ny sisa.
Ny fikasihana ny taila rindrina alohan'ny narian'ny mpilalao teo aloha dia heverina ho maloto. Amin'ny fotoana voalohany hampandrenesana anao dia amin'ny fotoana faharoa voasazy amin'ny 5 (homena ny mpilalao tsirairay), ny fahatelo 10, ny fahefatra 20, sy ny sisa.
Raha tsy hita ilay mari-pamantarana dia avela ho aiza izy. Raha hita ny mari-pamantarana, dia tsy ho afaka handresy izany lalao izany ny mpilalao (tanana maty), na dia afaka manohy milalao aza ianao, mangalatra fanariana sns.
Mangataha Pung amin'ny fanemorana
Mangataha famantarana ho an'ny Pung misy mihoatra ny 3 segondra tara dia heverina ho lesoka. Amin'ny fotoana voalohany hampandrenesana anao dia amin'ny fotoana faharoa voasazy amin'ny 5 (homena ny mpilalao tsirairay), ny fahatelo 10, ny fahefatra 20, sy ny sisa.
Mahjong diso (Hu diso)
Raha manana ilay mpilalao latsaky ny 8 isa tsy maintsy mandoa 10 ho an'ny mpilalao tsirairay ary hanana tanana maty, na dia afaka manohy milalao aza izy, mangalatra fanariana sns.
Raha toa ka ny mpilalao tsy mahafeno ny fepetra takiana raha hanao Mahjong ao anaty fanariana (misy tile 14 mahery ianao na latsaky ny 14, manao fahadisoana amin'ny tile famaranana sns), tsy maintsy mandoa ianao 20 ho an'ny mpilalao tsirairay ary hanana tanana maty, na dia afaka manohy milalao aza izy, mangalatra fanariana sns.
Ary koa, rehetra ireo chip aseho avy amin'ny mpanambara ny Mahjong sandoka tsy maintsy ariana amin'ireto mpilalao manaraka ireto dia mihodina.
rehetra aseho aseho ataon'ny mpilalao iray (mianjera izy rehefa mangalatra azy amin'ny rindrina, manipy azy eo anelanelan'ny chips eny an-tanany sns.) tsy maintsy ariana amin'ny anjaran'ny mpilalao manaraka.
Raha misy mpilalao asehoy ny sombinao rehetra rehefa misy mpilalao hafa manambara ny mahjong manao hadisoana izy. Raha farany ilay mpilalao nanambara Mahjong Win, ilay mpilalao nampiseho ny sombiny dia nanoro hevitra.¿ Tsy mandresy ve ilay mpilalao hafa? tsy maintsy manipy ireo chips aseho tsirairay.
Raha mpilalao manambara rakitra hafa, tsy maintsy mandoa ilay mpilalao maratra ianao eo anelanelany Isa 5-60 notapahin'ny mpitsara (izay hanapa-kevitra ihany koa raha hanohy ny lalao na tsia).
Teboka tsy mety
Raha mpilalao latsaky ny 13 chips na mihoatra ny 13 eo anelanelan'ny fihodinana iray dia manana izy tanana maty, na dia afaka manohy milalao aza izy, mangalatra fanariana sns.